အဆိုပါရထားအားဖြင့်ဥရောပအတွေ့အကြုံများသလားဖြစ်ရမည် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အဆိုပါရထားအားဖြင့်ဥရောပအတွေ့အကြုံများသလားဖြစ်ရမည်
ဥရောပမှတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တိုက်ကြီးဖြစ်ပါသည် စူးစမ်းလေ့လာ! ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာကိုမြင်မှုနှင့်အတူ, မ Discover, ဒါဟာအဆုံးမဲ့စီစဉ်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောအရပ်ဌာနဖွင့်, ရထားဥရောပအတွေ့အကြုံများ.
ဥရောပရထားအတူတူမျက်ရည် – FIRST, STOP, လန်ဒန်:
ရထားနောက်ထပ်ဥရောပအတွေ့အကြုံများကိုအတွက်ချွတ် start သင့်တယ် လန်ဒန်! ဒါဟာသူကပြောပါတယ်ရဲ့ “လန်ဒန်မြို့ရှိတစ်ဦးကမကောင်းတဲ့နေ့ကတုန်းပဲပိုကောင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားတစ်ဦးကောင်းသောနေ့ထက်ဖြစ်ပါတယ်။” ဒါကြောင့်, အဲဒီမှာ start ရဲ့ပါစေ! တစ်ဦးအကြွင်းမဲ့အာဏာမဖြစ်မနေအဆိုပါဖြစ်ပါသည် ဟယ်ရီပေါ်တာခရီးစဉ် Warner Bros ၏. စတူဒီယို သငျသညျ super-ပန်ကာမဟုတျပါလျှင်ပင်. အဆိုပါ နည်းပညာ, မော်ဒယ်နှင့်နောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများရုံအံ့သြဖွယ်များနှင့်မြင်နေရကျိုးနပ်များမှာ. ဒီ spellbinding တွင်6တစ်နာရီခရီးစဉ်, ထိုကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းအဖြစ်မူရင်းစုံကိုမြင်၏9¾နှင့်ထောင့်ဖြတ် Alley; အဆိုပါ Hogwarts Express ကိုရေနွေးငွေ့ရထားကိုတွေ့မြင်; သရုပ်ဆောင်များကဲ့သို့သော broomstick စီး, နှင့် '' On-screen ကို wizardry ရုပ်ရှင်၏နောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများလျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖော်ထုတ်. ဤသည်ဟယ်ရီပေါ်တာစတူဒီယို လန်ဒန်ခရီးစဉ် အသွားအပြန်နည်းပြများပါဝင်သည် တင်ဆောင် နှင့်ဝင်ပေါက်လက်မှတ်တွေ Warner Bros ၏လန်ဒန်ဟယ်ရီပေါ်တာခရီးစဉ်အကြောင်းကိုပိုမို Read. သို့ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်အတူစတူဒီယို ဒီမှာ.
ပဲရစ်: ဟုတ်သည်ပြောဆို’ အနုပညာရှင်တစ်ဦးရန်သင့်ပုံတူပန်းချီ
ရထားဖြင့်သင့်မယ့်ဥရောပအတွေ့အကြုံများပဲရစ်ဖြစ်သင့်. ပီကာဆိုရဲ့အချိန်အတွက်, Montmartre အဓိကအားဖြင့်သောက်သုံးတွင်းနှင့်ပြည့်စုံတစ် bohemian ပရဒိသုခဲ့ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်လေရဟတ်စက်တစ် raffish ကခုန်ခန်းမသို့လှည့်. ယနေ့တွင်, သန့်ရှင်းသောCœur၏အရိပ်ထဲတွင်နေရာ du Tertre အလွယ်တကူသင့်ရဲ့သဏ္ဍာန်ကိုဖမ်းယူမည်သူအနုပညာရှင်များပြည့်ဝ၏. ထိုနောက်မှ, ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးအနုပညာစတူဒီယိုသို့သွားရောက်, လှေ Lavoire, ပီကာဆိုပန်းချီကားနှင့် Braque ဘယ်မှာ, Juan Gri, နှင့် Modigliani တစ်ချိန်ကနေထိုင်ခဲ့.
The Magic MONTJUIC နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအားဖြင့်သင့်ဥရောပအတွေ့အကြုံ၏လှေကားတက်:
သင့်ရဲ့ပြီးနောက် ရထားခရီးစဉ် ပဲရစ်ကနေ, ရထားဖြင့်သင့်ကိုနောက်ဥရောပအတွေ့အကြုံများဘာစီလိုနာဖြစ်သင့်. ယခု, ကျနော်တို့ရဲ့ဒီလေ့ mispronounced မြို့ပြောပုံကိုကငျြ့သုံးကြကုန်အံ့စတင်ရန်မတိုင်မီ. အတော်များများကအင်္ဂလိပ်စပီကာအသံကြိုးစား ‘ပိုပြီးစပိန်‘ ကို 'က c အသံထွက်အားဖြင့်’ တွင် ဘာစီလိုနာ တစ်ဦး '' ကြိမ်မြောက်အဖြစ်’ နှင့် ဟု '' ဘား-The-lona ''. သို့သော် Catalan တှငျ (Catalonia ၏ဘာသာစကားကို, ဘယ်မှာ ဘာစီလိုနာ တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်), ကို 'က c’ တစ်ဦး 's အဖြစ်အသံထွက်နေသည်’ – ဒါကြောင့် '' ဘား-up, ပတ္တူ’ မှန်ကန်သောအသံထွက်ဖြစ်ပါသည်.
အခုဆိုရင်ကျနော်တို့ကလမ်းထွက်ရှိသည်, ရဲ့Montjuïcတောင်ကြီးတောင်ငယ်ပြောဆိုကြကုန်အံ့. ဤသည်နှင့်အတူတစ် leafy အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အမြင်များ. သင်သည်သင်၏လမ်းလျှောက်ရရှိပါသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ (သို့မဟုတ်အပြေးသငျသညျပိုနှစ်သက်ပါလျှင်) ပေါ်ဖိနပ်, သူကအဲဒီမှာတက်ရဖို့ legwork တစ်နည်းနည်းယူသကဲ့သို့, ဒါပေမဲ့ဒီကယ့်ကိုဆိုလိုတယ် အခြားအလှည့်ခရီးသည်များအားဖြင့်လျော့နည်းလူစည်ကား. ဘေးဖယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အံ့မခန်း Vista ကနေ, သင်အနေဖြင့်အဆောက်အဦးများတွေ့ပါလိမ့်မယ် 1992 အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ, အဆိုပါအပါအဝင် ပလောင်း Sant Jordi နှင့်ဆက်သွယ်ရေးစန်တီယာဂို Calatrava ကဒီဇိုင်း Tower.
ပရာ့ဂ်: နေဝင်ချိန်ကို AT တစ်ဦးကအလယ်ခေတ်တံတား BRIDGE တလျှောက်တွင်အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်
ပရာ့ဂ်ဥရောပ၏စိတ်နှလုံးအဖြစ်လူသိများသည်. ဤလှပသောနှင့် အတန်ငယ်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် မြို့တစ်မဖြစ်မနေ-ကိုတွေ့မြင်အပေါ်ဥရောပအတွေ့အကြုံအားဖြင့်ရထားခရီး. 14 ရာစုချားလ်စ်တံတား၏ကြီးမားသောအမြောက်အများနှင့်အတူ Vltava မြစ်ဖြတ်သန်းသွားသည် 1000-နှစ်အရွယ်ရဲတိုက် ဒါဟာနောက်ကွယ်ကစိတ်ပျက်ဖွယ်. ပျော်စရာတကယ်တော့; သည်အထိ 1841, အဲဒါကိုတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းခဲ့သည် မြစ်ကိုဖြတ်ကူး ဟောငျးမြို့ကနေ!
ပူဇော်သက္ကာကို နတ်သမီးပုံပြင်-ပုံပြင်အမြင်များ, လူကူး-သာ Gothic သောကျောက်တံတားနှင့်အတူစီတန်းဖြစ်ပါတယ် 30 သန့်ရှင်းသူတို့၏ရုပ်ပွားတော်များနှင့်အကောင်းဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးအစောပိုင်းညဦးယံအချိန်အခါ နေရောင် setting ဖြစ်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏သိသာသည်အခြားအတူရှိနေလျှင်, ဒီစေသည် အလွန်စိတ်ကူးယဉ် setting ကို.
ဤသည် cheesy ထင်ရစေခြင်းငှါ, သင်မူကား, ဗင်းနစ်ကိုသွားသည့်အခါ, မြို့အမှတဆင့်တစ်ဦးကြိုးတပ်စီးနင်းယ့်ကိုမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်. ပျော်စရာနဲ့ရင်ခုန်စရာဖြစ်ခြင်းအပြင်, ဒါကြောင့်လည်းတမြို့လုံးကိုမြင်ရဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း! အဆိုပါနေ့ရက်သည်လန်းဆန်း Bellini များအတွက်စတိုင်ဟယ်ရီရဲ့ Bar ကိုလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်ပယ်အဆုံးသတ်သင့်. ဒါကအဖြူမက်မွန်သီးဖျော်ရည်များနှင့် prosecco ဖြစ်ပါသည်, အဆိုပါကော့တေးဘားရဲ့တည်ထောင်သူများကတီထွင်ခဲ့သည်ဘယ်မှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏အာရှနှင့်ဥရောပအတွေ့အကြုံများရထားအားဖြင့် UNIQUE အစ္စတန်ဘူလ်ဖြစ်ပါသည်
အစ္စတန်ဘူလ်ဟာအပြာရောင်ဗလီအဘို့အကျော်ကြား. ကြှနျုပျတို့သညျဤအကြံပြုကြဘူးနေစဉ်, ကျနော်တို့ရထားအစ္စတန်ဘူလ်ဥရောပအတွေ့အကြုံအစွန်းပေါ်မှာသင့်ရဲ့အာရုံကိုဆွဲတူကိုလည်းင့်, ဥရောပထက်အာရှတိုက်ရန်၎င်း၏ပိုမိုနီးကပ်စွာအဖြစ်.
အစ္စတန်ဘူလ်မြေပြင်အထက်သာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်း မွေအောကျ အဆိုပါ Basilica တွင်းနှင့်အတူ (အဆိုပါ Basilica). ဘိုင်ဇင်တိုင်းအင်ဂျင်နီယာ၏ဤလက်ရာမြောက်သောအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အသက်ရှု-ဆည်းပူးနေ မြေအောက်ရေလှောင်ကန်, တစ်ချိန်ကအစ္စတန်ဘူလ်မှလက်ရှိဘူလ်ဂေးရီးယားထံမှရစေီးရလောမွောငျးနှင့်အတူသောက်သုံးရေဆောင်ခဲ့. ပူနွေးတဲ့အလင်းစဉ်းစားပါ, နှင့်အသံ နောက်ခံကစားဂန္ထဝင်ဂီတနှင့်အတူဒွန်တွဲပျော့သည်လည်းရေ. အဆိုပါဖို့အတွက် walkway ကိုနင်းနယ်နှင့်အကြားငါးရေကူးစောင့်ကြည့် 336 မျက်နှာကျက်ကိုထောက်ပံ့သောကော်လံ.
ကိုသွားပါ SaveATrain.com အတွက်သင်၏နောက်ရထားစွန့်စားမှုစာအုပ်ဆိုင်3မိနစ်များ, မှာ စျေးအသက်သာဆုံးမီးရထားလက်မှတ်ခနှုန်းထားများ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/europe-experiences-by-train/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / fr သို့မဟုတ် / nl နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / ကပြောင်းလဲနိုင်သည်.
traintip ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား travelfrance travelitaly travelspain ကြက်ဆင်